Jooji Wacadiyada Baraha Bulshada ee Ganacsiyada | Martech Zone
Jooji Wacadiyada Baraha Bulshada ee Ganacsiyada
Talaado, Febraayo 3, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxa jira dad aad u tiro yar oo aan ku ixtiraamo gobol ahaan iyo qaran ahaanba baraha bulshada - laakiin waxaan runti aaminsanahay inay u jiheeyaan meheradaha qaar jiho khaldan iyaga oo kula taliyay inay maalgashadaan kaliya shabakadda bulshada.
Sidaad ogtahay dadweynow, waxaan ka firfircoon ahay tan shabakadaha bulshada, boggaga warbaahinta bulshada iyo codsiyada bulshada. Waxaan sifiican ugu hayaa shabakadaha aan ka tirsanahay. Su’aashu waxay tahay sida ugu wanaagsan ee bloggeygu u qabtay mahad shabakadahaas bulshada. Si kastaba ha noqotee, kuwani waa saaxiibo aad loogu kalsoon yahay - shabakaddayda! Waa inay xisaabtamaan tirada badan ee taraafikada, sax?
Aynu eegno 143,579-kii ugu dambeeyay ee loo soo diray booqdayaasha boggeyga:
Google: 117,607 soo booqdeyaal gaar ah
StumbleUpon: 16,840 soo booqdeyaal gaar ah
Yahoo!: 4,236 soo booqdeyaal gaar ah
Twitter: 2,229 soo booqdeyaal gaar ah
Live: 605 martida gaarka ah
MSN: 559 soo booqdeyaal gaar ah
Weydii: 476 martida gaarka ah
AOL: 446 soo booqdeyaal gaar ah
Facebook: 275 soo booqdeyaal gaar ah
LinkedIn: 93 martida gaarka ah
Baidu: 79 soo booqdeyaal gaar ah
Altavista: 54 soo booqdeyaal gaar ah
Plaxo: 41 soo booqdeyaal u gaar ah
Netscape: 39 soo booqdeyaal gaar ah
Hadaan dhagaysan lahaa dhamaan Dhoobo, Maalintii oo dhan waan cusbooneysiin lahaa Facebook iyo LinkedIn inaad isku daydo inaad sameyso lacag. Ma yeelo
Waan otomatigaliyaa qoraalada iyo cusbooneysiinta shabakadahaas bulshada, laakiin waqti kuma lumiyo ka shaqeynta. Waxaa jira dhowr sababood:
Waxay yihiin horay shabakadayda aan aaminay. Uma baahni inaan ku riixo ama ka iibiyo iyaga - iyaguba durbaba way ila joogaan.
waxay ujeedadu tahay inaan ila xiriiro iyada oo loo marayo wacyigelintan bulshada maahan inay wax iga iibsadaan, kamana filayaan inaan wax ka iibiyo. Si kale haddii loo dhigo, kuma xadgudbi doono xiriirka aan la leeyahay dadkan.
Waxaan sii wadi doonaa isku dayga aan ku dhisayo xiriiro cusub oo macno samaynaya - iyada oo loo marayo makiinadaha wax lagu raadiyo. Waan ogahay inay jiraan dad raadinaya jawaabaha aan ku bixiyo balooggan sidaa darteed waxaan xooga saarayaa inaan sii kordhiyo soo socda aniga oo ka jawaabaya su'aalahaas. Waa ogolaansho ku saleysan, waa wayn (marka loo eego taraafikada 0.2% ee shabakadeyda), iyo iyaga ujeeddo waa in la raadiyo jawaabaha aan bixinayo.
Tan macnaheedu ma waxaad samaynaysaa waxa aan sameeyo?
MAYA! Kula talin maayo inaad iska indhatirto shabakadaha bulshada iyo dadka ku riixaya inaad isticmaasho. Waxa aan kugula talinayo waa inaad cabirto natiijooyinka dadaalkaaga oo aad u hagaajiso xeeladahaaga si waafaqsan. Dhoolatusyo aad u tiro badan ayaa halkaa ka jira iyagoo wacdinaya faa'iidooyinka Shabakadaha Bulshada iyagoon khibrad u lahayn inay kaa caawiyaan inaad cabirto natiijooyinka oo aad mudnaanta u siiso istiraatiijiyaddaada si waafaqsan.
Ku xujee la-taliyayaashan inay caddeeyaan faa'iidooyinka lacageed! Waxaan ku iri khubaro aan macaash doon ahayn Shirkadaha Shirkadaha maanta runta - ganacsi ahaan, waxaan ku cabirayaa hawlgelinta calaamadaha dollarka. Haddii aan sifiican u suuq geeyo, waxaan kordhinayaa iibkeyga iibka doolarka, kordhinta doolarkeyga kor u kaca, iyo sii wadida doolarka haynta
Tags: ganacsiga bulshadawarbaahinta bulshada ee shirkadahawarbaahinta bulshadaMedia Social Suuqsuuqgeynta warbaahinta bulshada ee ganacsigagudbinta warbaahinta bulshada
Ka Qaybgalka Suuqgeynta: Madadaalo Fiidiyowyo
Wixii aan ka bartay CloudCamp
Febraayo 4, 2009 saacadu markay tahay 6: 54 AM
Waxaan u maleynayaa inaad ku leedahay meel aad u ballaadhan halkaa, marka la eego farqiga badweynta ee u dhexeeya matoorada raadinta iyo kuwa kale. Si kastaba ha noqotee waxay noqon kartaa mid xiiso leh haddii mid ka mid ah la ogaado saamiga beddelaad ee qayb kasta sidoo kale, kaliya si loo hubiyo booqdayaasha kaliya ee dhiirrigelinta leh ee ka tirsan dhexdhexaad kasta.
Feb 4, 2009 markay ahayd 12:49 PM
Xaqiiqdii! Markaa talobixinta in si taxaddar leh loo cabbiro - oo lagu cabiro $. Mahadsanid goacom!
Feb 4, 2009 markay ahayd 6:41 PM
AAMIIN !! Gabi ahaanba waan ku raacsanahay. In kasta oo aanad waxba ka qaadaynin warbaahinta bulshada, waa inaad haysaa halka ay taraafikadaadu ka timaaddo dabiici ahaan! Xitaa marka aad gaadiidka ka hesho meelaha baraha bulshada qaarkood (yacni Stumbleupon), WAA INAAD cabirto QIIMAHA iyo Ujeeddada booqdayaashaas.
In kastoo… Waxaan sidoo kale gelin lahaa baloogyada isla qaybtaas…
Feb 4, 2009 markay ahayd 11:28 PM
Waan kugu raacsanahay 100%! Blogging-ka ayaa lagu daray oo WAA inuu ku soo laabtaa maalgashiga haddii loo adeegsanayo hab macquul ah oo lagu abuuro beddelaad. Qaar badan oo ka mid ah Smippies ayaa halkaa ku iibinaya baloog sida Quraanka Quduuska ah, laakiin ma barayaan shirkadaha sida istiraatiijiyad ahaan loo dejiyo baloog loona cabbiro natiijooyinka.
Raadintu waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah maxaa yeelay ujeedku wuxuu si toos ah ugu qoran yahay "sanduuqa raadinta" yar - haddii ay tahay PPC ama dabiici ahaan!
Feb 6, 2009 markay ahayd 1:05 PM
Xitaa gudaha bogagga bulshada waad ku sameyn kartaa tan. Waxaan dhajinay warar iyo macluumaad dhowr boggag iyo twitter ayaa noo keenaya taraafikada ugu tayada fiican. Waa kan labaad ee tirooyinka guud, laakiin waqtiga la qaatay iyo boggaga la eegay ayaa ka fog oo fog kuwa ugu fiican.
Marka qeyb hoosaadkaas, waxaan diirada saareynaa inaan hubino in twitter-ka uu qeyb ka yahay gaarsiintayada.
Feb 6, 2009 markay ahayd 9:04 PM
Xiiso leh, Twitter ma keenaysaa bartaada taraafikada ka badan Raadinta? Hadday sidaas tahay, taasi waxay noqon lahayd wax naxdin leh! Ama waxay macnaheedu noqon karaa inay tahay waqtigii aad heli lahayd xoogaa caawimaad SEO ah ama aad bilowdo a barta ganacsiga!
Feb 6, 2009 markay ahayd 3:43 PM
Waxaan ku jiraa PR waxaanan hubaal qabaneynaa wax badan oo ka mid ah la talinta SM / wacdinta maalmahan. Laakiin waxaan marwalba ka taxaddaraa inaan xusuusiyo macaamiisha in dadaalladaan cusub ay qayb ka ahaanayaan xalka dhammaystiran ee isku dhafan. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheena ayaa kaliya u baahan caawimaad khariidaynta muuqaalka dhijitaalka ah iyo u turjumidda waxyaabaha wanaagsan shabakadaha bulshada. Laakiin ugu dambeyntii waa inay ku soo noqotaa doolarka iyo muujinta qiimaha. Adiguna waxaad hoosta ka xariiqeysaa qodob muhiim ah in Google uu yahay "hoygaaga" waana inaad daryeeshaa ishaas marka ugu horeysa uguna muhiimsan. Mahadsanid. (ps waxaan ku xiriiray Twitter, heh)
Feb 6, 2009 markay ahayd 9:08 PM
Taasi waa wax laga naxo! Waan ku faraxsanahay inaan halkan kugu arko adiga oo adeegsanaya Twitter - Waxaan ka helaa ilaa 8% ka mid ah taraafigeyga maalmaha Twitterka sidaa darteed waan qiimeeyaa. Kaliya waxaan ka helaa 50% + Raadinta sidaa darteed wax yar ayaan fiiro gaar ah siinayaa halkaas! Feed Waxaan otomaatig uga dhigayaa quudintayda barta Twitter-ka Twitterfeed si aysan ugu baahnayn wax dadaal ah oo ku lug leh!
Febraayo 16, 2009 saacadu markay tahay 10: 31 AM
Post weyn Doug. Waxaad ku garaacday (fekerkeenna) barta ugu xasaasisan ee suuqgeynta - QIIMEYN. Dad badan iyo ganacsiyaduba way ku fashilmaan tixgelintiisa mana sameeyaan go'aanno aqoon leh ama wax ka beddel ku sameeya qorshahooda / waxqabadkooda suuq-geyn Ha igu qaldan, warbaahinta bulshada waa aalad isgaarsiineed oo weyn, laakiin waa inaad si macquul ah u qiimeysaa inta dadaal ee aad ku maalgelinayso iyada iyo kuwa kale ee dhexdhexaadka ah.